Yonke into oya kuze ufune ukuyazi malunga "namaxesha amahle" | Martech Zone
Yonke into Oya kuze ufune ukuyazi malunga "namaxesha amahle"
NgeCawa, uJuni 28, 2015 NgeCawa, uJuni 28, 2015 Douglas Karr
Ukuba andizange ndabelana nabanye Elona xesha lilungileyo le-infographic, Ndingavuya ukuba le yokugqibela. Kwaye ndiyathemba ukuba nawe wabelana ngayo nawe. Ndiyancwina lonke ixesha ndibona a elona xesha lilungileyo loku imbonakalo. Elona xesha lilungileyo lokuTweet. Elona xesha lilungileyo lokuhlaziya kuFacebook. Elona xesha lilungileyo lokuthumela i-imeyile. Elona xesha lilungileyo lokuhlaziya i-LinkedIn. Elona xesha lilungileyo lokubhloga. I-Argh… indiqhuba ngokwenene iphambene.
Nanini na xa umntu esabelana ngesinye sezi infographics, ndiyaqaphela indlela abadume ngayo kwaye bayaphoxeka ngokunyanisekileyo. Kodwa emva koko ndijonga amashishini okanye amaxesha abantu abelana ngawo kwaye akukho nto bayipapashayo. Sukujonga konke okwenziwa ngumntu wonke, jonga abaphulaphuli bakho kunye noluntu ukuba baphendule njani, babelane, babandakanyeke kwaye baguquke. Qaphela eyakho kubahlalutyi -Ujonge nemimandla yamaxesha njengoko uthatha isigqibo sokuba leliphi ixesha elifanelekileyo.
Ndicinga ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo lokupapasha? Ngokukhawuleza emva kokuba ugqibile ukubhala. Ndicinga nini elona xesha lilungileyo lokuhlaziya imithombo yeendaba zentlalo? Xa unexesha kwaye unento exabisekileyo onokwabelana ngayo. Oku kulandelayo kuyaqhubeka nokukhula kwaye upapasho lwethu lukhula ngamanani aphindwe kabini ngaphandle kwenkqubo yethu yokupapasha.
Ngokukrakra… lo ngumdyarho, hayi isantya somjikelo. Nyathela igesi kwaye ucofe imoto xa usiya. Imoto ephumelele ugqatso ayikho phakathi kwepakethi, iphume phambili.
tags: elona xesha lilungileyoElona xesha lilungileyo le-infographicelona xesha lilungileyo lokuElona xesha lilungileyo lokuthumelaElona xesha lilungileyo lokupapashaElona xesha lilungileyo lokuthumela i-imeyileelona xesha lilungileyo lokuthumela i-tweetElona xesha lilungileyo lokuhlaziya u-facebookElona xesha lilungileyo lokuhlaziya i-linkin
Urhwebo olubanzi: Tyala imali kulungelelwaniso, hayi ilayisensi
Uyithengisa njani kwaye uyazisa njani iMnyhadala yakho elandelayo kwi-Intanethi